Global Voices teny Malagasy » Firaisankina Manerantany Ho an’ireo Nanjavona Tamin’ny Voromby Malayziana MH370 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Marsa 2014 23:50 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Efa ho lasa izao ny roa herinandro nanjavonan'ny Malaysian Airlines nandritra ny sidina niainga avy any Kuala Lumpur nankany Beijing saingy mbola tsy afa-nanondro ny toerana misy azy sy ireo mpandeha 239 tao aminy ny manampahefana. Nitarina ny fikarohana ny sidina MH370  rehefa nandamoka ny fikarohana azy teo amin'ny faritra farany nahitana ny diany tamin'ny radar.
Noho ny tsy fisian'ny fampafantarana ofisialy momba izay nanjò ny MH370, maro ny olona no lasa mitodika amin'ireo tombatombana sy ireo petrakevitra  tsy mampino loatra mba hitadiavana ny antony nahatonga ny fanjavonan'ny voromby feno misitery ity. Manampy trotraka amin'ny fahorian'ny havana sy naman'ireo mpandehan'ny MH370 ny fandisoam-baovao. Naneho ny fahatezerany sy ny sorisoriny noho ny tsy fisian'ny vaovao tsara momba ny fanjavonan'ny voromby ny havana sasantsasany.
Mankasitraka  ireo firenena rehetra nanampy an'i Malayzia tamin'ny fikarohana ny MH370 ny praiminisitra Najib Razak:
Nihetsi-po  tamin'ny fanohanana manerantany azon'i Malayzia i Susan Ng A. Suan:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/03/22/58691/